I-Multitool Leatherman: ukubuyekezwa kwamamodeli
Noma ubani ongazi ukuthi yi-multitool, akunakwenzeka ukuthi aqonde ngokushesha lokho okuzoxoxwa ngakho. Leli ithuluzi elikhethekile elihlanganisa ukukhethwa kanye nokusetshenzwa kwamapayipi. Ziyi-pliers ezincane ezinezimbambo ezingenalutho ezikuyo, futhi ngaphakathi kwazo ezinye izakhi.
UMultitool Leatherman ungumholi phakathi kwabanye. Lokhu kungenxa yokuthi, empeleni, umqondo wokudala ithuluzi elinjalo ungomsunguli wale firm Tim Lazerman. Ngakho-ke, singasho ngokuqiniseka ukuthi amamodeli alo nkampani amazinga.
Isici sethuluzi ukusebenza kwayo, kanye nezakhi ezisizayo: zivela kummese kuya ku-coorkscrew noma ifayela. Kumele kuqashelwe ukuthi kunezinketho eziningi ngezakhiwo ezihlukene.
Kubantwana kanye nentsha, inkampani ikhiphe i-multitool Leatherman Leap. Angaba isipho esihle kakhulu kubafana abancane nabafana abaneminyaka engu-16 ubudala. "Ikhono" elimangalisayo lommese liyikhanda layo elikhishwayo. Ngendlela, yenziwa ngensimbi futhi ineamandla aphakathi (420HC).
Umzuzu omuhle wukuthi i-multitool yezingane ayifuni isethi esimisiwe nemisebenzi yokunqunywa, kodwa, ngokuphambene nalokho, ithuluzi elihluthulelwe ngokuhlukile. Ukuqaphela okukhulu kumkhiqizi kuye kwakhokhwa ekuphepha. Unganaki ubukhulu be-Leatherman e-multi-tin, babenakekele abaqambi, ngakho-ke isihloko sifaneleke esandleni.
Nakuba iqhwa lommese lisuswa, kubalulekile ukunakekela izenzo zezingane noma kunjalo, ngoba ithuluzi liqukethe izikhali, amapulethi kanye ne-hacksaw.
Umuntu ovamile uyakulungele kakhulu i-Wave yama-multitool. Lokhu akukona ngethuluzi lokuqala, kodwa "ukuphindwa" kwalo kuka-2004. Iqukethe amadivaysi angu-17, asezindlini ezihambelanayo nezilula. Ithuluzi lifanela kalula ephaketheni elincane. Phakathi kwezinsimbi ezihlukahlukene ze-Leatherman multi-tin iqukethe imimese emibili (enye yawo enomlenze ovuthiwe), ifayela, i-opener, umnikazi omncane, ama-nippers, amaphini, izikhali,
Ithuluzi lenziwe ngensimbi engagqwali, umkhiqizi ungeze umnikazi nesembozo esincane. Ukulinganisa i-multitol 230 g, ubukhulu: 10 x 5 cm.
Kungani lo modeli odumile kangaka iminyaka eminingana elandelana? Into yokuthi ihlanganisa ukusebenza okuhle kakhulu, intengo nokutholakala.
I-Multitool Leatherman: ukubuyekezwa komodeli we-Charge TTi
Lo modeli ulula ngokwanele - isisindo saso singu-240 g. Insimbi esetshenziselwa ukwakha umsila wommese unabantu abangu-S30V. Esikhathini kunezinhlobo ezimbalwa zabanikazi. Ngokuvamile, ithuluzi linezinsiza ezingu-19 ezizayo. Kukhona i-saw encane, i-opener, i-screwdriver, ifayela kanye nezikhali.
Lezi zinki ezifakwe ema-multitool zingasetshenziswa njengezinsipho kanye neziphequluli ezivamile. Ukukhokhisa i-TTi iyakwazi ukwehlisa usayizi ngokubekwa okuthe xaxa, okuyinto ebaluleke kakhulu. Kodwa-ke, iqiniso lokuthi kukhona indandatho ye-lace, umenzi akanikeli isembozo.
Ngokungafani nenguqulo yangaphambilini ye-Wave, le modeli ine-blade yekhwalithi engcono kakhulu, izibambo ze-titanium, iqoqo lezinkinobho. Nokho, izindleko cishe ngama-ruble ayizinkulungwane ezingu-2-3. Ngakho-ke, uma kukhona imali eyengeziwe, kungcono ukugoqa leli multitool.
I-Multitool Leatherman: ukubuyekezwa
Ngaphambi kokuthenga i-multitool, abathengi abaningi bacabanga ukuthi iyiphi inkampani kanye nomodeli okufanele ukhethe. Ngakolunye uhlangothi, ngifuna ukuthenga inguqulo ephezulu, wonke umuntu owake wezwa futhi abantu abambalwa behluleka, ngakolunye uhlangothi, asikho isifiso sokuchitha okuningi.
Uma ufuna ukuzijabulisa wena, umngane wakho, umfowenu noma ingane yakho nge-multitool engabizi futhi efanelekile, kungcono ukhethe uhlobo lwe-Leatherman. Ukubuyekezwa mayelana nalokhu umkhiqizi kuningi kunesimo esihle. Uma uhlela amanye amathuluzi, i-flashlight inikezwa. Ngokusho abanikazi, uhlangabezana nezici ezicacisiwe zenkampani kanti empeleni uyakwazi ukukhonza cishe iminyaka eyi-10.
Phakathi kwezimo zabathengi ziqokomisa ukuthi kwamanye amamodeli ummese uvula kanzima noma kuphela elandeleni elilandelayo (emva kokuvulwa kwamaphini). Isisindo samadivayisi anjalo kakhulu (ngamasokisi okwenziwe ngezandla), ngakho-ke ukhetho lweselula lokusetshenziswa kwansuku zonke akuzona ezilula kakhulu.